Dagaal culus oo ka dhacay Waajid | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal culus oo ka dhacay Waajid
Dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay Garoonka diyaaradaha magaaladda, halkaas oo Ciidamo Itoobiyaan ah ay ku leeyihiin fariisamo, sida ay Saraakiisha gobolka u sheegeen KON.
WAAJID, Soomaaliya - Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed oo kaabaya kuwa Itoobiya, ayaa xalay Kooxda Al-Shabaab dagaal xoog leh kula galay magaaladda Waajid, ee gobolka Bakool.
Dadka degaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab markii horey ay hoobiyeyaal ku garaacday Garoonka diyaaradaha kadibna ay soo weerartay, waxaana u suurta-gashay inay mudo saacado ah la wareegto gacanta ku heynta magaaladda.
Ciidamada ayaa dib ugu laabtay saakay saldhigyadooda kadib markii ay Al-Shabaab dib uga baxday. Lama oga illaa hadda khasaarihii labada dhinac kasoo gaarey dagaalkii dhacay, kaasoo ahaa mid culus, oo socday ku dhawaad hal saac.
Waajid waxay kamid ahayd magaalooyinkii Al-Shabaab laga saarey 2014, laakiin inkastoo la xoreeyay wali waxaa saaran go'doon lagu soo rogay, taasoo ka dhalatay inay dadka shacabka ah dhibaato dhanka nolosha ah soo wajahday kadib markii ay qaali noqdeen badeecooyinka.
0 Comments Topics: al-shabaab dagaal itoobiya
Xaqiijinta Heshiiska Berlin
Dib u soo noolaynta Hamiga Xabashida & Heshiiska Berlin
Maqaallo 10 May 2021 8:01
Dadkeena Soomaaliyed waxaad moodaa inay aad uga mashquuleen kana sii jeesteen hardankii soo jireenka ahaa, oo aad moodayso in la kala xaday lana kala xiray oo isfahamkeenii umadnimo ku xiran yahay shirar ay noo qabtaan dad aan isku feker ahayn.
Xaqiijinta Heshiiska Berlin 1884
Dib u soo noolaynta Hamiga Xabashiida - Qeybta 2-aad
Maqaallo 10 December 2020 11:03